I-China TS Manual Hydraulic Operation Operation Table yabenzi bezibhedlela nabaphakeli | I-Wanyu
Ithebula le-TS Manual Hydraulic Operation Operation Yesibhedlela
Ithebula lokuhlinza nge-hydraulic lilungele ukuhlinzwa kwe-thoracic nesisu, i-ENT, i-obstetrics ne-gynecology, i-urology ne-orthopedics, njll.
Ngokuhlukile etafuleni elijwayelekile lokusebenzisa ngesandla, sisebenzisa uhlelo lokuphakamisa umfutholuketshezi nentwasahlobo yegesi ukulungisa amapuleti angemuva nasemlenzeni. Yenza inqubo yokulungisa ithule futhi ilungele.
Isisekelo esimise okwakwa-Y sisetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi itafula elisebenza ngokubacindezela linokuzinza okuphezulu nesikhala esikhululekile, ukuze abasebenzi bezokwelapha bakwazi ukusondela esigulini bangaqedi.
Idizayini yamasondo amakhulu ibuye iyenze ingabi nokudlidliza nokudilizwa ngesikhathi sokuhamba.
Izinto ezingaphezulu zetafula lokuhlinza lokubacindezela lilangabi ilangabi futhi limelene ne-static. Omatilasi ababunjiwe be-polyurethane (PU) kulula ukuwahlanza futhi unempilo ende yokusebenza.
2. Ibhuloho Lezinso Elakhelwe ngaphakathi.
Faka isibambo emgodini ohambisanayo, ujikeleze isibambo bese wenza ibhuloho okhalweni likhuphuke noma lehlele endaweni efanelekile, bese ukhipha isibambo. Etafuleni elisebenza ngogesi we-TS, ukuphakama kwebhuloho okhalweni kungaphezu kwe-100mm.
Imemori Foam Ethuthukile
3. Kungenisiwe Hydraulic System
Kungeniswe uhlelo lokubacindezela oluvela eMelika lwenza ukuhamba kwethebula lokusebenza mathupha kuzinze futhi kusheshe.
4. Angular Aukulungiswa with Gnjengoba Simisho
Kokubili ipuleti langemuva namajoyini wepuleti lomlenze wetafula elisebenza ngogesi le-TS anezakhiwo zokwesekwa kwegesi entwasahlobo, ezenza ukulungiswa okuhlukahlukene kube mnene, kuthule, futhi kungadlidlizi, kuyilapho kuvikelwa ngempumelelo ukwakheka okuhlangene nokuvimbela isiguli ukuthi singawi.
5. Lukwakhiwa kwe-arger caster
Isisekelo setafula lokusebenzisa u-hydraulic lakhiwe ngama-casters amakhulu (ububanzi ≥100mm), eguquguqukayo ukuhamba. Ama-casters aphakama lapho kubhuleka amabhuleki, isisekelo sombhede sixhumana ngokuqinile nomhlabathi, futhi ukuzinza kuhle.
3. Isistimu ye-Hydraulic engenisiwe
Ukulungiswa kwe-Angular ne-Gas Springs
Idizayini enkulu ye-caster
Into Yesibonelo Ithebula le-TS Hydraulic Operating
Ubude nobubanzi 2050mm * 500mm
Ukuphakama (Phezulu Naphansi) 890mm / 690mm
I-Head Plate (Phezulu Naphansi) 60 ° / 60 °
Ipuleti Emuva (Phezulu Naphansi) 75 ° / 15 °
Ipuleti Lomlenze (Phezulu / Phansi / Ngaphandle) 30 ° / 90 ° / 90 °
Ukutsheka Kwesikhathi Esizayo (Kwesobunxele nakwesokudla) 20 ° / 20 °
2 Ukusekelwa Komzimba 1 Bhangqa
3 Ukuxhaswa Kwengalo 1 Bhangqa
4 Ukuphumula Kwamahlombe 1 Bhangqa
5 Idolo Crutch 1 Bhangqa
6 Ukulungisa Ngocingo 1 Setha
8 Ibhande Lomzimba 1 Setha
Langaphambilini Intengo Yethebula Lokusebenza Likagesi le-TDY-1 laseChina
Olandelayo: I-LEDD500 / 700C + M Ceiling LED Double Dome Operating Room Light ngeVidiyo-Ikhamera
TY Engagqwali Manual umfutholuketshezi Ukuhlinzwa Tab ...
TS-1 Engagqwali Mechanical umfutholuketshezi Opera ...